ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ခရီးသွားလာမှုကိုအထူးအရာတစ်ခုခုသည်. ဒါဟာသီးသန့်ဖြစ်ပါသည်. သင်ကချမ်းသာနှင့်တစ်ခုလုံးကိုလေယာဉ်၏သာယာအဆင်ပြေမှုများမွေ့လျော်, အားလုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်. တစ်ခုလုံးကိုသင်္ဘောသားသင်၏ဝန်ဆောင်မှုမှာသင့်ရဲ့ခရီး၏သင်တန်းကာလအတွင်းအားလုံးသင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်.
အဘယ်အရာကိုမျှတစ်ဦးနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အရွယ်အစားပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားဝန်ဆောင်မှု၏ဇိမ်ခံပစ္စည်းနှင့်ချမ်းသာဖို့နှိုင်းယှဉ်. ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံးရွက်လှေ၏တောင်မှကြော့ရှင်းအချို့ကိုသင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်အတွင်းပိုင်း step တစ်ချိန်ကသင်မြင်ရလိမ့်မည်အရာကိုအနီးကပ်မဟုတ်ပါဘူး. သငျသညျသငျတို့ရှေ့မြင်ကြဖူးဘူးတီဗီမှနောက်ဆုံးပေါ်ဂီတကစားသမားမှဇိမ်ခံမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုတစ်ခုတည်းကို item နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောဂျက်လေယာဉ်အတွင်းပိုင်းရှာတှေ့နိုငျ. သငျသညျလေယာဉ်ဒီလိုမျိုးအတွင်း၌ရှာတွေ့အဆိုပါဇိမ်ခံပစ္စည်းသင်အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်သူမြားမဟုတျပါ. သူတို့ဟာအကောင်းဆုံးဇိမ်ခံကားအမှတ်တံဆိပ်များ၏ကန့်သတ်လွှတ်ပေးမှုတွေဟာ.
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကိုလာမည့်အဆင့်အထိဇိမ်ခံကြာ. ဒါဟာအစအမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှုအားအသစ်သောအဓိပ္ပာယ်ကိုပေးသည်. တစ်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အရွယ်အစားပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ, သငျသညျပိုမြန်သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်. ဤရွေ့ကားဂျက်လေယာဉ်များပိုမိုမြန်ဆန်အများဆုံးစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းများထက်ပျံသန်း. တစ်ဦးကထိပ်တန်းမြန်နှုန်းမှာတချို့ကခရုဇ် 982 km / h. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ခရီးသွားလာမှုရှည်လျားလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများနှင့်အဓိကလေဆိပ်များဗျူရိုကရေစီအထဲကသင်ကယ်တင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူဤပေါင်းစပ်နှငျ့သငျထိပ်တန်းထိရောက်မှုနှင့်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်.
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သာယာအဆင်ပြေမှုများသည်ဤလောကီထဲကဖြစ်ကြသည်. သငျသညျဆင်းသက်မီကပူပြင်းတဲ့ရေချိုးခန်းခံစားနိုငျ. ဒီဂျက်သုံးနေပြီလျော့ပါးမှကူညီပေးပါမည်. သင့်ရဲ့ခရီးသွားစဉ်အတွင်း, သငျသညျဟင်းလျာရဲ့အကောင်းဆုံးရ, ဖျော်ဖြေရေး, နဲ့ productivity tools တွေကို.
သင်တစ်ဦးနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အရွယ်အစားပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်တိုင်းအကြောင်းပြချက်ရှိမယ့်အစားစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းကိုအသုံးပြုပြီး. Warren Buffet ဖြင့်, Berkshire Hathaway ၏ပိုင်ရှင်တခါပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုသူစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်သူပွုပါပွီဘယ်တော့မှနိုင်သောအရာလုပ်ဖို့သူ့ကို enabled သိရသည်ဟုဆိုသည်. စူပါအရွယ်အစားပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုကိုလာမည့်အဆင့်သင့်လုပ်ငန်းကြာမြင့်မည်.
ကိုးကား X ကို
ကိုးကား Excel ကို
Hawker 800 XP ကို
Hawker 900 XP ကို
ဂတ်စ်မှပုဂ္ဂလိကဂျက် - အဆုံးစွန်ဇိမ်ခံကား - အန်တုသူ 300